Nin adduunyo joogow maxaa aragti kuu laaban waaba gabadhaada intaad guri ku soo xiratid 24 sano 7 caruur ah kaga dhal rabii yasi
Nin u dhasha dalka Austria oo 73 jira oo gabar uu dhalay ay ugu xirnayd shelare ku yaalla gurigiisa hoostii muddo dhan 24 sano isla markaana ka dhalay 7 caruur ah nin ayaa waxaa ku xirtay gabadhan iyadoo jirta 18 sano halkaasi isla markaasina boliska iyo dowladda Ostri u sheegay in ay gabadhiisa maqantahay.
By somalichradio at 2008-05-07 11:31
Baaq ku wajahan dhamman Ummdadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddisa
Qoraalkaan waxaan ugu mahad celinayaa dhamman dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibadiisa ee sida wadaniyadda leh mar walba ooga fakeraya waddankooda. Waxaan in badan oo dadkan ka mid ah kula kulmay dalka Djibouti, Dubai, Kenya, Norway, Swiden, iyo dalka Maraykanka. Haddana, waxaan wakhti dhow rajaynayaa in aan kuwo kale kula kulmo dalka Ingiriisaka, Kanada iyo meelo kale.
By somalichradio at 2008-05-07 11:17
maxamed Dheere hadalkiisii maxaa ina Yeey ka yiri?
Dabadhilifka sheegta Gudoomiyaha gobalka Banaadir Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere) ayaa si kulul uga jawaab celiyay hadal kasoo yeeray dabadhilifka kale ee sheegta raâ€™isul wasaare ku xigeenka dowladda federalka ahna wasiirka warfaafinta iyo Isboortiga Axmed Cabdi Salaan Xaaji Aadan oo uu ku sheegay in maamulka gobalka Banaadir is badal lagu sameyn doono.
By somalichradio at 2008-05-05 18:25
Halyey Aden Xaashi Ceroow waa nin ceenkee ah
Aden xaashi ceyro waxa uu dhashay 1976, oo weliba muuqaal ahaan waxa uuu u muuqday in uu intaasika yar yahay oo caato madax xiiran,sida ragga kale ee ku jira kooxaha islaamiga uma eka oo shaarib iyo ger midna malaha.
By somalichradio at 2008-05-01 20:25
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay maamul KMG ah u magacawday Gobolka Hiiraan
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo maamul 90 cisho shaqeynaya u magacawday Gobolka Hiiraan
Arbaco, April 30, Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay maamul KMG ah u magacawday Gobolka Hiiraan oo muddooyinkan maamul laâ€™aan ahaa kadib markii maamulkii gobolkaas loo magacaabay ay ka awood roonaadeen Xoogagga ka soo horjeeda Dowladda Federaalka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo maamul 90 cisho shaqeynaya u magacawday Gobolka Hiiraan.doc 502.5 KB
By somalichradio at 2008-04-30 11:33
Maxkamadaha Islaamka oo sheegay in ay howlgallo burcad sifeyn ah ka sameynayaan Wadada Xeebta marta ee isku xirta Muqdisho iyo G
Maxkamadaha Islaamka oo sheegay in ay howlgallo burcad sifeyn ah ka sameynayaan Wadada Xeebta marta ee isku xirta Muqdisho iyo Gobollada Dhexe
Arbaco, April 30, 2008 Masâ€™uul u hadlay Maxkamadaha Islaamka ayaa shaaca ka qaaday in ay wadaan howlgallo ay kula dagaalamayaan Kooxaha Burcadda ah ee dhaca u geysta Dadka Safarka ah ee u kala goosha Muqdisho iyo Gobollada Dhexe.
By somalichradio at 2008-04-30 11:03
Waxaa markasto sharaf weyn inoo ah inaan uga mahadceliyo dadka soomaliyeed oo marwalbo daacada ey ka tahey xal u helida dhibaatda ku habsatey ummada soomaliyeed. Anagoo aaminsan goâ€™aankii taariikhiga ahaa ee Beesha Ceyr Habargidir ku taagertay dhibaatooyinka Abbaraha sidey wax uga tari lahayd sida idaacadaha aduunka oo ku xaqiijiyey ulujeedadiisa dhabta ah ee ku raadinayo horukac bulsho weynta soomaliyeed.
By somalichradio at 2008-04-29 22:56
Hadaad maqashay SYL,.Maanta ka midnoqo Shabaabka
Erayga Al-shabaab waxaa eray carabi ah macnahiisana uu yahay dhalinyaro,waxaad moodaa in inta badan dadka Somali eey u fasirteen eraygaa al-shabaab macno ka duwan midka reer carbeedka eey ku macneeyaan,waxaa iyana cajiib ah in marka aad maqasho SYL aad markiiba maskaxda eey kuu sheegeeyso in macnahu uu yahay dhalainyaro is urursatay magacana ku midowday,hadaba labadaa urur xaqiiqdii waxaa eey ka wada siman yihiin macno ahaan dhalinyaro jecel xornimada dalkooda hooyo midna waxaa uu soo shaac baxay qarnigii 19aad xiligii Somalia uu ku soo duulay gumeeystihii cadaa ee reer yurub midna waxaa uu
By somalichradio at 2008-04-29 18:04
Madaxweynaha Dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa shalay Booqasho ku tagay Dalka Sacuudiga,ka dib markii uu martiqaad ka helay Boqo
Madaxweynaha Dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa shalay Booqasho ku tagay Dalka Sacuudiga,ka dib markii uu martiqaad ka helay Boqorka Sacuud Carabiya Cabdalla Bin C/casiis.
By somalichradio at 2008-04-28 21:17
Machadka Baarista iyo Tirakoobka Dadweynaha (Statistisches Amt ) ayaa waxa uu soo bandhigay cilmi baaris uu ku sameeyay 25 jaal
Machadka Baarista iyo Tirakoobka Dadweynaha (Statistisches Amt ) ayaa waxa uu soo bandhigay cilmi baaris uu ku sameeyay 25 jaaliyadood oo ku nool wadankaan Swisska.
Cilmi baaristan ayaa loogu dan lahaa u kuur gelidda xaaladda nolosha wadankaan Swisska, hase ahaatee waxaa Cilmi baaristan ay si gaar ah ugu kuur gashay kaalinta jaaliyaduhu ee dalka swisska.
Inkastoo Soomaalida ay tahay qowmiyada tiro ahaan ugu badan ee ku nool Kanton ZÃ¼rich oo Afrikaan ah, balse aysan dhinaca dhaqaalaha wax badan oo la sheega ku soo kordhinin wadankaan.
By somalichradio at 2008-04-23 19:39